Hoggaamiye 50 Sano soo maamulayay Wadanka Cummaan oo geeriyooday.
Saturday January 11, 2020 - 09:08:13 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Cummaan ayaa lagu xaqiijiyay in uu geeriyooday Suldaan Qabuus Bin Saciid oo ahaa hoggaamiyihii wadankaas mudo 50 sanadood ah soo maamulayay.
Wakaaladda wararka ufaafisa dowladda Cummaan ayaa sheegtay in Suldaanku uu shalay oo Jimca aheyd ku dhintahay Isbitaal kadib xanuun uu muddo latacaalayay, suldaanka dhintay ayaa 79 sana jir ahaa.
Suldaanka dhintay ayaa muddo 50 sanadood ah xilka hayay wuxuuna talada Cummaan qabtay sanaddii 1970-kii, intii uu talad hayay ayuu dhulka Jaziiradda Carabta soo geliyay ciidamo Saliibiyiin ah oo isugu jira American iyo British.
Telefeshinka ku hadla Afka dowladda ayaa iclaamiyay in hoggaanka wadanka loo magacaabay Suldaan cusub kaas oo lagu magacaabo Heytham Bin Daariq Ala Saciid, ninkan ayaa horay u ahaa wasiirka dhaqanka iyo xoghayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda.
Warbaahinta Afka dowladda ku hadasha waxay sheegaysaa in Suldaan Qaabuus loo sameyn doono baroor diiq sedax maalmood ah islamarkaana calanka wadanka hoos loo dhigayo muddo ku siman 40 maalmood.
Suldaan Qaabuus ayaa la sheegaa in uu hormar dhanka dhaqaalaha ah gaarsiiyay wadanka Cummaan oo kamid ah dalalka ugu xadaaradsan wadamada Carabta marka laga hadlayo hanaanka dowladnimada balse wuxuu ahaa shareeca diid dowladaha reergalbeedka u ogolaaday in ay saldhigyo ka sameystaan Cummaan.